Outlook Express Qalabka Dayactirka. Outlook Express Dayactir Software.
DataNumen Outlook Express Repair waa kan ugu fiican Outlook Express qalabka dayactirka iyo soo kabashada adduunka. Waxay hagaajin kartaa musuqmaasuqa Outlook Express Faylasha DBX iyo MBX oo dib ugalaabo inta emaylladaada intii suurtagal ah, taas oo yareyneysa luminta musuqmaasuqa faylka.
Fiiro gaar ah: Fadlan isticmaal DataNumen Outlook Repair inuu ka soo ceshado emayllada iyo walxaha kale faylalka 'Outlook PST' ee musuqa ah.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,633 cod)
maxaad DataNumen Outlook Express Repair?
Heerka soo-kabashada waa most shuruudaha muhiimka ah ee ah Outlook Express soo kabashada xogta. Iyada oo ku saleysan tijaabooyinkayaga dhameystiran, DataNumen Outlook Express Repair leeyahay heerka ugu wanaagsan ee soo kabashada, aad uga fiican tartamayaasha kale ee suuqa ku jira!
Baro wax badan oo ku saabsan sida DataNumen Outlook Express Repair sigaar cabaya tartanka
Tarjumaad madaxbanaan iyo horumarinta bogga
Ugu dambeyntii - shey sameeya waxa ay ku tiraahdo iyadoo aan toos loo wajihin qaab aan micno lahayn iyo natiijo heer sare ah. Wanaagsan! Waxaan jeclaan lahaa inaan horay u helo badeecadaada
Nasiib wanaag waxaan haystay faylasha dbx oo dhan oo aan kaydinayay laga soo bilaabo Nofeembar 19-keedii inta kalena way ahayd
Waxaa loo adeegsaday nooca demo ee DOER -
Waan iibsaday DataNumen Outlook Express Repair oo aan si guul leh u soo ceshay faylalka galka ku jiray oo si uun uga libdhay liiskayga OE. Kaaga
Xallinta Xisaabinta Maareeyaha Express
Waxyaabaha kale ee yar,
Waxaan lahaa lost emayllada muhiimka ah inta lagu gudajiray hawsha wadajirka mana uusan aqoon sida loo helo ama dib loogu furo. Badeecadaada ayaa xalisay arinta
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen Outlook Express Repair v2.5
Taageero soo kabasho Outlook Express 4 mbx feylal iyo Outlook Express 5/6 dbx faylasha.
Taageero dib u soo kabashada faylasha dbx iyo faylasha MB ee ku saabsan warbaahinta musuqmaasuqsan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo dayactiro qayb ka mid ah feylasha dbx iyo faylasha mbx.
Taageero lagu dayactirayo dbx iyo mbx feylasha ilaa 4GB, marka waxay hagaajin kartaa faylasha dbx dhibaatada 2GB.
Taageero soo kabasho Outlook Express xogta laga helo temrary .dbt faylasha
Taageero si loo helo oo loo xusho faylasha dbx ama mbx si loogu hagaajiyo kombiyuutarka maxalliga ah.
Taageerada isdhexgalka ee Windows Explorer, markaa waxaad ku hagaajin kartaa faylka dbx oo leh menu macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
Taageerada xariiqda taliska (DOS degdeg ah) xuduudaha, markaa waxaad ka codsan kartaa DOER barnaamijkaaga.
Isticmaalka DataNumen Outlook Express Repair inuu ka soo kabto Outlook Express emails
Outlook Express wuxuu kaydiyaa dhammaan e-mayllada faylasha .dbx. Tusaale ahaan, feylka Inbox.dbx waxaa ku jira emayllada ku jira Inbox, faylka Outbox.dbx waxaa ku jira emayllada ku jira sanduuqa, iyo wixii la mid ah.
Haddii faylka .dbx uu kharribmo oo aadan heli karin emayllada ku jira, waad isticmaali kartaa DataNumen Outlook Express Repair inuu ka soo ceshado emaylladaada. Emailada la soo helay ayaa loo keydiyay sida faylasha .eml oo si fudud dib loogu soo celin karo Outlook Express.
Soo hel faylka musuqmaasuqa ah .dbx ama .mbx in la dayactiro hadaadan sidaa yeelin.
Fiiro gaar ah: Kahor hagaajinta dbx musuqmaasuqa ama mbx faylka leh DataNumen Outlook Express Repair, fadlan xir Outlook Express iyo codsi kasta oo wax ka beddeli kara faylka.
Xullo dbx musuqmaasuq ama faylka mbx ah oo lagu hagaajiyo:
Waxaad si toos ah ugu soo dari kartaa magaca dbx ama mbx magaca faylka ama guji kan
badhanka si aad uga hesho dbx ama mbx faylka lagu hagaajinayo kombiyuutarka deegaanka.
Marka la eego, DataNumen Outlook Express Repair wuxuu soo saari doonaa dhammaan fariimaha la soo helay diiwaanka xxxx_recovered, halkaas oo xxxx uu yahay magaca dbx musuqmaasuq ama feyl mbx ah. Tusaale ahaan, feyl faylka Inbox.dbx, galka wax soo saarka asalka ah waa Inbox_recovered. Haddii aad rabto inaad isticmaasho buug kale, markaa fadlan ku xulo si waafaqsan:
badhanka, DataNumen Outlook Express Repair doonaa start ka soo kabashada waraaqaha dbx ama faylka mbx. Bar horumarka
Nidaamka dayactirka ka dib, haddii fariimo kasta laga soo helo feylka dbx ama mbx si guul leh, waxaad arki doontaa sanduuqa fariinta oo sidan ah:
Hadda waxaad ku furan kartaa fariin soo kabsatay leh Outlook Express adiga oo laba jeer gujinaya the
astaanta faylka .eml ee galka wax soo saarka. Ama soo dhoofso farriimo badan galka boostada Outlook Express.
DataNumen Outlook Express Repair 2.5 waxaa la sii daayay Diseembar 24, 2020
DataNumen Outlook Express Repair 2.3 waxaa la sii daayay Nofeembar 9th, 2020
DataNumen Outlook Express Repair 2.2 waxaa la sii daayay 28 Sebtember 2013
DataNumen Outlook Express Repair 2.1 waxaa la sii daayay 7 Luulyo, 2009
DataNumen Outlook Express Repair 2.0 waxaa la sii daayay Janaayo 29, 2009
DataNumen Outlook Express Repair 1.5 waxaa la sii daayay Diseembar 6th, 2006